Xasan Sheekh oo Ka Digay Qorshe Ay Xukuumadda Farmaajo Ka Damacsan Tahay Xildhibaanada Cusub | Gabiley News Online
Xasan Sheekh oo Ka Digay Qorshe Ay Xukuumadda Farmaajo Ka Damacsan Tahay Xildhibaanada Cusub
October 3, 2020 - Written by admin
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka digay qorshe uu sheegay in xukuumadda Farmaajo ay damacsan tahay oo ku aadan xildhibaanada cusub ee loo soo xulayo baarlamanka cusub ee Soomaaliya.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in madaxda hadda joogta Soomaaliya ay doonayaan inay kuraasta baarlamaanka keenaan dad yar “oo askar camal ah,” oo iyaga u codeeya, hase yeeshee ayna middaasi socon doonin, tartankuna dhab noqon doono.
“Waxay ku haminayaan in ay soo saari karayaan dad yar oo ugaardiya, si ay ugu codeeyaan laakiin waxaan dhihi lahaa taas hortaa jiraa waayey,” ayuu yidhi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Digniinta Xasan Sheekh ayaa imanaysa iyada oo xukuumadda Farmaajo ay si dadban iyo si toos ah u maamuli doono doorashooyinka qaar ka mid ah xildhibaanada.
Xildhibaanada beelaha ka soo jeeda Somaliland iyo kuwa Banaadiriga ee Muqdisho lagu dooranayo waxaa maamuli doona dowladda dhexe. Waxay sidoo kale maamuli doonaan xildhibaanada kasoo galaya Jubaland ee lagu dooranayo Gedo.
Xukuumadda Farmaajo ayaa dhanka kale ka xidhiidh wanaagsan la leh maamullada Galmudug, HirShabelle iyo Koonfur Galbeed, taasi oo ka saacidi karta inay si dadban ugu lug yeelato soo xulista xildhibaanada cusub ee Baarlamanka Soomaaliya